ओली-प्रचण्डबीच वान टु वान वार्ता, के भयो कुराकानी ? — Imandarmedia.com
ओली-प्रचण्डबीच वान टु वान वार्ता, के भयो कुराकानी ?
काठमाडौं । अस्पतालबाट बिस्चार्ज भएको २४ घण्टा नबित्दै नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच वान टु वान वार्ता भएको छ ।
अस्पतालबाट हिजो साँझ डिस्चार्ज भएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्न प्रचण्ड शनिवार विहान बालुवाटार पुगेका थिए । प्रचण्ड’ले बालुवाटार पुगी प्रधानमन्त्री एवम् अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वास्थ्यस्थिति बारे जानकारी लिएका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले मिर्गौलाको प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई बधाई दिए । अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरेका थिए । प्रचण्डले समसामयिक राजनीतिक गतिविधिका बारेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई जानकारी गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा ५ देखि ६ लाख रुपैयाँ खर्च लागेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालले खुलासा गरेकाे छ । गत बुधबार प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिएको थियो ।
शुक्रबार प्रधानमन्त्री डिस्चार्ज भई बालुवाटार निवास फर्केपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रेमकृष्ण खड्गाले उपचार खर्च पुरै हिसाब गरि नसके पनि ५ देखि ६ लाख लागेको खुलासा गरे । अब प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको रेखदेख निजी चिकित्सक र नर्सहरुले बालुवाटारमै गर्ने उनले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनकी भान्जी समीक्षा संग्रौलाले मिर्गौला दान गरेकी थिइन् ।
दोस्रोपटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि प्रधानमन्त्री ओली फागुन १९ गते साँझ अस्पताल भर्ना भएका थिए । २१ गते प्रधानमन्त्रीको मिर्गौलाको प्रत्यारोपण गरिएको थियो । ओलीलाई भाञ्जी समीक्षा संग्रौलाले मिर्गौला दान गरेकी थिइन् । उनी भने बुधवार डिस्चार्ज भइसकेकी छिन् । प्रत्यारोपित मिर्गौलाले राम्रोसँग काम गरेको र प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि आए आज(शुक्रवार) प्रधानमन्त्री अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका हुन् ।
मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि विदेशी अस्पताल लगिने चर्चाका बीच प्रधानमन्त्री ओलीको मिर्गौला प्रत्यारोपण डा. प्रेम ज्ञवालीको नेतृत्वमा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपणमा १६ जना चिकित्सक सहभागी थिए ।
प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपण शल्यचिकित्सा टोलीमा ६, मिर्गौला प्रत्यारोपण चिकित्सा टोलीमा ६, एनेस्थेसिया तथा क्रिटिकल केयर टोलीमा ४ गरी १६ जना चिकित्सक सहभागी भएका थिए । स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार आएपनि सामान्य अवस्थामा फर्कन प्रधानमन्त्री ओलीलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म लाग्ने चिकित्सकले बताएका छन् ।
दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई सामान्य मानिसजस्तै हिँडडुल गर्न अझै ६ महिना लाग्ने उनीहरुको भनाइ छ । प्रधानमन्त्रीकी निजी चिकित्सक समेत रहेकी डा दिव्या सिंहका अनुसार पूर्ण रुपमा संक्रमण मुक्त हुन तथा सामान्य मानिसजस्तै हिँडडुल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई ६ महिना लाग्न सक्छ ।
‘औषधिको डोजहरु बढी भएका कारण अहिले उहाँलाई संक्रमणको डर रहन सक्छ । उहाँले पहिला पनि मिर्गौलाको प्रत्यारोपण गरेको र उहाँको परिवारलाई पनि यससम्बन्धी ज्ञान भएको हुनाले त्यति संकट नआउला । तैपनि अहिले पूरै पब्लिकमा गएर, भिडभाडमा जान हामीले सल्लाह दिँदैनौं,’ मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी दिन त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा डा सिंहले भनेकी थिइन् ‘उहाँले आफ्ना दैनिक कार्यहरु आफ्नो अफिसबाट, सचिवालयबाट गर्न सक्नुहुन्छ । खास गरेर रुघाखोकी लागेका र अरु संक्रमण भएका मानिसबाट जोगिनुपर्ने हुन्छ । एकदमै सक्रिय भएर सामान्य मानिसले जस्तै काम गर्न उहाँलाई अझै वर्षदिन, ६ महिना लाग्न सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री निवासमा ओलीलाई संक्रमणमुक्त राख्ने गरी प्रबन्ध मिलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीलाई आराम गर्नुका साथै रुघाखोकीलगायत संक्रमणबाट जोगिन चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन् । चिकित्सकका अनुसार मिर्गौला प्रत्यारोपणपछिको एक महिना विशेष सावधानी आवश्यक हुन्छ र त्यसपछि पनि सतर्क रहनुपर्छ ।
६९ वर्षीय ओलीलाई पहिलो एक महिना शरीरको प्रतिरोधात्मक शक्तिलाई शिथिल पार्ने (इम्युनो सप्रेसेन्ट) औषधि उच्च मात्रा दिइने हुनाले संक्रमणको जोखिम हुन्छ । उनले रुघाखोकी लागेकाहरूबाट विशेष रूपमा जोगिनुपर्नेछ । त्यसैले त्रिवि शिक्षण अस्पतालबाट साँझ ६ः३० बजे डिस्चार्ज भएर बालुवाटार फर्कने क्रममा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षालगायतमा संलग्न रहेकाहरूले मास्क लगाएका थिए ।
अस्पतालबाट फर्किने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई स्वागत गर्न उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित मन्त्रीहरू, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङ, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत नेकपाका नेताहरू पुगेका थिए । मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि बुवालाई ढोगेर बालुवाटारबाट निस्केका प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार अस्पतालबाट निवास छिर्दा पनि बुवालाई ढोकामा ढोगेका थिए । बालुवाटार फर्किसकेपछि ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गौलाको सफल प्रत्यारोपण गर्ने चिकित्सकहरूले आभार व्यक्त गरेका छन् । उनले स्वास्थ्यलाभको कामना गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी ‘मित्र’ तथा नेपालीलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
ओलीको मिर्गौला १० दिनअघि प्रत्यारोपण गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीको शरीरमा दुइटा आफ्नै र दुई पटकको प्रत्यारोपणपछि दुईवटा दाताको गरी चारवटा मिर्गौला छन् । प्रधानमन्त्री ओलीलाई यसपालि मिर्गौला दिएकी भान्जी समीक्षा संग्रौला गत बुधबार अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकी थिइन् ।
चिकित्सकका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको भाइटल र ल्याब पारामिटर राम्रो अवस्थामा छन् । प्रधानमन्त्री ओली चिकित्सकको नियमित निगरानीमा समेत रहने प्रा.डा. शाहले जानकारी दिइन् । उनले आवश्यक सतर्कताका साथ प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नियमित काम गर्न सक्ने बताइन् । ‘प्रधानमन्त्री ओलीले वर्ष दिनपछि साधारण मानिस जस्तै एकदम सक्रिय जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ,’ प्रा.डा. शाहले भनिन् ।
प्रधानमन्त्री ओली मिर्गौलाको समस्याका कारण करिब आठ महिनादेखि विभिन्न परीक्षणसँगै उपचार प्रक्रियामा थिए । करिब तीन महिनाअघि एपेन्डिसाइटिस भएपछि शल्यक्रिया गरिएको थियो । सिंगापुरमा प्लाज्माफेरेसिस गराउँदासमेत मिर्गौलाको कार्यक्षमता अत्यधिक घटेपछि पटकपटक डायलसिस गरिएको थियो । निजी चिकित्सकहरूले मिर्गौला प्रत्यारोपणको सल्लाह दिएका थिए ।